Madaxweynaha oo gaaray Golaha Shacabka si uu u soo xiro Fadhiga 6-aad ee Baarlamaanka | Dhacdo.com
Home Uncategorised Madaxweynaha oo gaaray Golaha Shacabka si uu u soo xiro Fadhiga 6-aad...
Madaxweynaha oo gaaray Golaha Shacabka si uu u soo xiro Fadhiga 6-aad ee Baarlamaanka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu goor dhow gaaray Xarunta Golaha Shacabka Ee Magaalada Muqdisho, iyadoo maanta lagu wado in la soo xiro Fadhiga 6-aad Baarlamaanka.
Boqolaal ka mid ah Ciidamada Dowladda, ayaa waxaa lagu soo daadiyay wadooyinka soo gala, kana baxa Xarunta Baarlamaanka, waxaana laga xanibay dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale, ee gaarka loo lee yahay.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa lagu wadaa in khudbad uu u jeediyo Xildhibaanada, oo maanta uu u bilaabanayo fasaxooda, waxayna dib shaqada ugu soo laaban doonaan 15-ka bisha soo socota ee October.
Fadhigan 6-aad oo furmay 22-kii bishii April, ayaa waxaa furay Madaxweynaha, wuxuuna qorshuhu ahaa in la soo xiro 27-kii bishii hore ee August, inkastoo dib u dhaca sabab looga dhigay Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha.
Ka hor inta aanu Madaxweynuhu gaarin Xarunta Golaha Shacabka, ayaa waxay Xildhibaanadu ku yeesheen kulan ay kaga hadlayen shirka lagu wado in 20-ka bishan uu ka furmo Magaalada Muqdisho.
Shirkan, ayaa waxaa ka qaybgeli doona Madaxda Dowladda, Madaxda Maamul Goboleedyada, Wakiilada Beesha Caalamka iyo qaybo ka mid ah ururuada bulshada rayidka, waxaana looga hadlayaa hiigsiga sanadka 2016-ka iyo waxa looga gudbi doono Dowladda hadda jirta, marka uu waqtigeedu dhammaado.
Shirkan, ayaa wixii ka soo baxa uu qorshuhu yahay in lala taggo shir daba yaaqada bishan ka furmanaya Magaalada New York, oo looga hadlayo wixii Somaliya u qabsoomay, ka dib xilligii ku meel gaarka.
Madaxda Dowladda & Maamul Goboleedyada, ayaa waxaa la fillayaa in aragti mideysan ka yeeshaan qaabka lagu soo dooran doono Madaxweynaha Somaliya sanadka soo socda, si Beesha Caalamka ugu muujiyan in arrintaasi ay ka mideysan yihiin.